Etazonia: Inona Marina No Lazain’ilay Saribakoly Miteny? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Aogositra 2017 17:57 GMT
(Marihina fa tamin'ny 15 Oktobra 2008 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Raha mihevitra ianao fa tsy midika na inona na inona ny fibadabadan'ny zazakely dia mieritrereta tsara aloha vao miteny izany! Manontany momba ilay “saribakoly miteny” avy amin'ny Fisher Price, mpanamboatra Bébé Câlin, izay toa nomelohina fa niteny hoe: “Fahazavana ny finoana Islamo” ny tontolon'ny bilaogy. Maro ny ray aman-dreny Amerikana no tohina ary nisy fivarotana sasany mihitsy aza no nanala ilay saribakoly “tsy mendrika” tao amin'ny fivarotany.
Any Etazonia, manasa ny daholobe “hihaino sy hitsara” izany i Mike Mozart ao amin'ny Jeepersmedia :
Rehefa avy nandre izany, nanamarika ilay bilaogera Amerikana Progressive Muslima News:
Vao mainka latsaka ambany ireo olona ratsy toetra amin'ity fankahalana ny Islamo ity , amin'ny filazana fa miantso an'i Satana ilay saribakoly miteny (Little Mommy Real Loving Baby Cuddle and Coo) avy amin'ny Fisher-Price , ary milaza fa “Fahazavana ny Islamo ” (Fanamarihana ho an'ny tsy mahafantatra : toa mazava fa ilay saribakoly lazaina fa Islamika dia tsy mibadabada ny andian-teny toy ny hoe “i Satana no Mpanjakanay”).
Tena nihaino tsara ny feon'ity saribakoly ity aho ary tsy naheno teny hafa, afatsy ny fibadabadan'ny zazakely mahazatra .
Namintina kosa anefa izy hoe:
Hoy i Myrtus avy any Maraoka raha nanampy hoe:
Henoy tsara izay lazain'ilay saribakoly .
“Fahazavana ny finoana Islamo”?
“Izany no fahafinaretan'i Neny”?
Naneho hevitra momba ity tranga ity i Jillian York, mpanoratra ato amin'ny Global Voices Online misahana an'i Maraoka, ary nanoratra tao amin'ny Kabobfest :
Ho an'ny ankamaroan'ny olona, ​​tsy inona ity saribakoly ity fa saribakoly mandrebireby ihany izay manome feo tsy fantatra ary mahatonga ireo ray aman-dreny ho mikorotan-tsaina.
Kanefa ho an'ireo vondrom-piarahamonina any Afovoany Andrefan'i Etazonia dia mpampihorohoro ity saribakoly ity.
Araka an'i Tulsa, fantsom-pahitalavitra KJRH ao Oklahoma, milaza zavatra hafa ankoatr'ireo ilay saribakoly miteny , “Fahazavana ny finoana Isilamo.” (Azonao atao ny mihaino ilay hafatra ato; Henoko tsara ny teny hoe “alina” na “hazavana” , kanefa tena tsy azoko an-tsaina mihitsy hoe inona àry izany lazain'ireto olon'adala ireto izany).
Hoy i Jillian York nanohy :
Eny, andeha ary atao hoe tena miteny hoe “Fahazavana ny finoana Isilamo” ilay saribakoly. Midika mazava izany fa an'ny mpampihorohoro mifandray an-tsokosoko amin'i Obama ny Fisher Price ary mikasa hanjakazaka eto amin'izao tontolo izao. Mazava!
Na mety nisy lehilahy iray niadaladala loatra nanala azy tao amin'ny orinasa Fisher Price indray andro.
Farany, nahita fomba fijery hafa i Aussie Dave avy any Israely. Ao anatin'ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe Infidoll (kilalaonteny momba ny fanitsakitsaham-bady sy ny “saribakoly” ), hoy izy nanoratra:
Fantaro ilay saribakoly Be Fitiavana miteny avy amin'ny Fisher-Price.
Angamba mety ho fantatrao izy amin'ny alàlan'ny orinasa mpamokatra azy: “Ilay saribakoly kely mpampihorohoro izay manompo an'i Allah sy i Satana.”